mp3တရားတော်များ
mp4တရားတော်များ
ရိုဟင်ဂျာအရေး ဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ကြောင်း ဦးသိန်းညွှန့် ပြော
8:13 PM အမျိုးသားရေး No comments
...သော်လည်း ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဟူသည် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကော်မရှင်က အသိမှတ်ပြုထားသော လူမျိုးများထဲတွင် မပါဝင်၍ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် NNDP ခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းညွှန့် က ပြောဆိုလိုက်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော NNDP တည်ထောင်သည့် တနှစ်ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ပြည်သူ့
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်သည့် ဦးသိန်းညွှန့်က ထိုသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကော်မရှင် တင်ပြထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုးမှာ ‘ရိုဟင်ဂျာ’ မပါတဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာ
အရေးကို မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါဘူး” ဟု ဦးသိန်းညွန် က ယတိပြတ် ပြောဆိုသွားသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေသည် ပြည်သူဆန္ဒကို ရယူထားသည့် ဥပဒေ ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂမှ ချမှတ်ထားသော စံချိန်စံနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီမှာသာ ၎င်းအနေနှင့် အဆိုတင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးသိန်းညွန့်က ဆက်လက်ပြောဆို
“၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသားဥပဒေက အဲ့ဒီတုန်းက အာဏာရှင်စနစ် အောက်မှာ ပြုထားသော်လည်း လူ့အခွင့်ရေးကို အသိမှတ်ပြုတယ်။ နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ လူတွေကို ဧည့်နိုင်ငံသား ပြုခွင့် ပေးထားတယ်။ မပေးထားတာ တချက်ပဲ။
နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့အတွက် သမ္မတ လုပ်လို့ မရဘူး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လုပ်လို့မရဘူး။ နိုင်ငံရေး ရာထူးတွေ ယူလို့မရအောင် လုပ်ထားတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့နိုင်ငံမှ မဟုတ်ဘူး။ တခြားနိုင်ငံမှာလည်း နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူ
တွေ ဒီလိုကန့်သတ်တာပဲ” ဟု ၎င်း၏ ပါတီ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် ပြောဆိုသွားသည်။
ဝက်သားစားခြင်း မစားခြင်းဆိုတာထက် လူမျိုးဘာသာမခွဲခြား မြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်အမှန်ရှိလျှင်
8:07 PM အစ္စလာမ်ဘာသာအကြောင်း No comments
(၁)ပလီထဲကို ဘာသာလူမျိုးမခွဲဘဲ ဝင်ရောက်ခွင့် ရှိ/ မရှိ
(၂)ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာသည့် တိုင်းတစ်ပါးသား ဘင်္ဂါလီမူစလင်များကို မြန်မာပြည်တွင်းနေ မူစလင်များက လက်ခံခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ
(၃)ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အပါအဝင် ဆော်ဒီအစရှိသည့် OIC နိုင်ငံများမှ မြန်မာပြည်တွင်းရေး ပဋိပက္ခများကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအား မြန်မာနိုင်ငံ မူစလင်အဖွဲ့များက လုံးဝ လက်မခံကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ
(၄)ပလီများတွင် ကလေးများအား အချိန်ပြည့်ခေါ်ယူကာ အာရဗီစာနှင့် ဆော်ဒီနိုင်ငံအား အထင်ကြီးစေရန် ပုံစံသွင်း သင်ပေးနေခြင်း အစား အစိုးရပညာရေး ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားစေခြင်းကိုသာ ပြောင်းလဲပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ
(၅)မြို့တစ်မြို့လျှင် ပလီတစ်လုံးသာ ထားရှိစေပြီး ပိုလျှံပလီများအား ဖျက်သိမ်းပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ
(၆)အစ်ကာလတွင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်တစ်ခုလျှင် နွားကောင်ရေ(၁၀၀၀)သာ သတ်ခွင့် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ
(၇)ပလီဝန်းကျင်ရှိ ဈေးဆိုင်ခန်းများအား လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားဘဲ ငှားရမ်းခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ
(၈)အစ်ပြုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်အကောင်ရေ (၁၀၀၀)အတွင်း နွားတစ်မျိုးတည်း သတ်ခြင်းအစား ကြက်/ဘဲစသည်ကိုပါ ၃၀% ထည့်သွင်းသတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ
(၉)အကြမ်းဖက် မူစလင်များကဲ့သို့ အချိန်ပြည့် မုတ်ဆိတ်ထားခြင်း/ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများကဲ့သို့ အချိန်ပြည့် ဝတ်ဆင်ခြင်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုခြင်း ရှိ/ မရှိ
(၁၀)မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ
(၁၁)ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ရဟန်းသံဃာတော်များကို ကိုယ်နှုတ်စိတ်စသည်ဖြင့် စော်ကားပြုမူသူအား မူစလင်လူမျိုးအဖြစ်မှ ပြစ်ပယ်ကြောင်းနှင့် ထောင်ဒဏ်(၁၀)နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးရန် လွှတ်တော်သို့ အဆိုပြုလွှာ ပေးပို့နိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ ---------- အခုဖော်ပြထားတဲ့ အချက်(၁၁)ချက်ကို လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကလည်း လူမျိုး ဘာသာ မခွဲခြား မြန်မာနိုင်ငံဖွား မူစလင်များအား ပုခုံးဖက်ဖို့ ဝန်မလေးပါကြောင်း။
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲ မြင့်မှ
7:44 PM အမျိုးသားရေး No comments
၁။ မိတ္ထီလာ အဖြစ်အပျက်မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များဘက်မှ အရောင်းအ၀ယ် မှာ မကျေနပ်တာကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် လုပ်ခဲ့လို့ စခဲ့ရကြောင်း...
၂။ ဘုန်းကြီး တစ်ပါးကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ကြက်ကလေး၊ ငှက်ကလေး သတ်သလို သတ်သွားလို့ အပြန်အလှန် မီးရှို့မှုတွေ ဖျက်ဆီးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း...
၃။ အစ္စလာမ် တွေက မီးသတ်တွေကို ဟန့်တားခဲ့တာ ရှိခဲ့ကြောင်း...
၄။ အခုဖြစ်တေဲ့ သတင်းစကား.. ကောလဟာလတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းသံဃာတွေ နဲ့ လူတွေရဲ့ ကူညီမှုကို လစ်လျူရှု့ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င်တွေက ဘာသာရေး အခွဲခြား ခံရတယ်လို့ ပြောနေကြတာ ဖြစ်ကြောင်း...
၅။ အစ္စလာမ်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက စောင့်ရှောက်ခဲ့တာတွေကို မျက်ကွယ် ပြုနေကြကြောင်း..
၆။ ဒီသတင်းစကားတွေ ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကြောက်နေကြကြောင်း၊ အသက် အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေကြ ကြောင်း၊ သံသယစိတ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မယုံမကြည် ဖြစ်နေကြကြောင်း၊
၇။ လုံခြုံရေးတွေ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကြားက သဲတော၊ ၀မ်းတွင်း၊ ရမည်းသင်း ဘက်တွေကို ကူးဆက်သွားပါကြောင်း၊
၈။ ဒါတွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဘက်က ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တစ်မျိုး လုပ်နေတာတွေ ကြောင့် ဖြစ်နေရကြောင်း၊
၉။ ကလေးတွေကို မဟုတ်တာတွေ သင်ပေးထားလို့ ဖြစ်နေရတာ ဖြစ်ကြောင်း။
၁၀။ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဆန်ဆန် ပြောဆိုနေကြတာ မကောင်းကြောင်း။
၁၁။ 'ဗမာ့လည်ချောင်းသွေးနဲ့ ခြေဆေးမယ်' လို့အော်တာ မကောင်းကြောင်း။
၁၂။ ရှေ့လျှောက်လုံခြုံရေး ကိစ္စတွေကို ဂရုစိုက် ဆောင်ရွက်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း။
၁၄။ အစွန်းရောက်တွေ ဖြစ်လာရင်တော့ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်တာတွေ ဖြစ်လာပြီး ဒီအတိုင်းပဲ နေကြရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း။
၁၅။ အစွန်းရောက်သမားတွေက ဗလီတွေကို ဗုံးခွဲပြီး ဗမာတွေက ခွဲပါတယ်လို့ ပြောကြဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း။
၁၆။ အစွန်းရောက်တွေကို ခင်ဗျားတို့ သိပါကြောင်း။
၁၇။ အားလုံး အေးအေးဆေးဆေးနေကြပါ၊ သတင်းကြားရင် အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ၀ိုင်းကူပါ။ မကူဘူးဆိုရင်လဲ တစ်ချိန် အားလုံး သိရမှာပါ ဆိုသော အကြောင်း။
၁၈။ မိတ္ထီလာ သတင်းအမှန်က တဘက်စောင်းနင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ ညနေပိုင်း ဘုန်းကြီး ကို သတ်ထားပြီး ညပိုင်းမှာ အော်ကြ ဟစ်ကြလို့ ဖြစ်သွားတာပါ။
၁၉။ ခင်ဗျားတို့ အထဲမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ပေါ်နေရင် ထိမ်းပေးပါ။ အစွန်းရောက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် သတင်းပေးပါ။
၂၀။ အစွန်းရောက် ကိစ္စ ခင်ဗျားတို့ဘက်က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်...၊
၂၁။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့ ရှေရှည်နေနိုင်မှာပါ။
အလ်ဟာဂ်ျ မောင်လာနာ ခလီဖွတ် ဦးသိန်းဝင်းအောင်က ကုလားဥာဏ်ဖြင့်...
ကျွန်တော်တို့သည် အစွန်းရောက်မှာ မဟုတ်ပါကြောင်း ကြောက်ရွံနေသူများသာ ဖြစ်ပါကြောင်း.. ကလေးတွေကို သင်ပေးထားလို့ ('ဗမာ့လည်ချောင်းသွေးနဲ့ ခြေဆေးမယ်') အော်တယ် ဟစ်တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကလေးတွေ ဟော်တာဟာ ဘုရားသခင်ကို တသ အကူအညီတောင်းတဲ့ စကားရပ်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း.. ဘယ်သူ့ကိုမှ သတ်ဖို့ ဖြတ်ဖို့ ဟစ်ကြွေးကြတာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း ပြန်လည် ကာကွယ် ပြောဆို ခဲ့သောကြောင့်...
ဦးရဲ မြင့်မှ ဦးသိန်းဝင်းအောင်က ကုလားဥာဏ်ဖြင့် ပြောဆိုနေသောကြောင့်.. ပုံပြင်တွေ လာပြောမနေနဲ့ ဥပဒေဖောက်တဲ့လူ ဒဲ့ဘဲ သွားရမှာပဲ ဟု အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆို ခဲ့ပြီး အခန်းအနားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်...
ထို့ကြောင့် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့များမှ ဦးရဲမြင့်အား အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များ အားစော်ကား ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ သမ္မတရုံးသို့ တိုင်စာပေးပို့....
(ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အနေနဲ့... အမျိုးဘာသာ.. သာသနာအတွက်... အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဖော်ထုတ်ပြောဆို သတိပေးခဲ့သော မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့် ဘက်က ရပ်တည်ပေးကြပါ... ဦးရဲမြင့်ပြောဆို သတိပေးခဲ့တာတွေကို ထောက်ခံ ကြကြောင်း ပြောဆို ပြသ၍ ဦးရဲမြင့်ဘက်က ၀န်းရံပေးကြ စေလိုပါတယ်...)
7:41 PM အမျိုးသားရေး No comments
လူထုမောင်ကာဠုရဲ့ ဦးတည်ချက်က လက်ရှိအစိုးရ (အစိုးရဆိုတာကလည် ဘယ်အစိုးရတတ်တတ် အဲဒီအစိုးရကိုပဲ သစ္စာခံမယ်.. တခြာဘယ်သူ သစ္စာမှ မခံဘူး)ကို အတိုတ်ခံလုပ် တိုင်းပြည်တိုးတတ်ရာ တိုးတတ်ကြောင်းကို ဖျက်စီးနှောက်ယှက်တဲ့ သူတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ဆန့်ကျင့်တယ် ရှင်းအောင် ထပ်ပြောရရင် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထာတယ်...
နောက်ပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာအန္တရာယ်ရန်စွယ်ကို တတ်နိုင်သလောက် သုတ်သင်ဖယ်ရှာနေတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို ဝိုင်ကူတဲ့ အနေနဲ့ လုပ်ပေးနေ တာလောက်ပါပဲ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် မူဆလင်ကုလားတွေ အန္တရာယ်ကို အရင်ကသိမ့်သတိမထား မိပါဘူး..
ရခိုင်မှာ မသီတာထွေး ကိစ္စဖြစ်ပြီးရိုဂိန်ညာတွေ က ယုတ်မာကောက်ကျစ်ပြီး ကျနော်တို့ ညီအစ်ကို သားချင်း ရခိုင်တွေကို ရက်ရက် စက်စက်သက်တာတွေ မြင်တွေ့ရတော့ အကြီးကျယ်စိတ်နား သွားတယ်...
ကုလားဆို မြင်ကိုမမြင်ခြင်းလောက်အောင် စိတ်တော်တော်နာသွားပြီး
အဲသလိုပြောလို့ ပြည်တွင်းနေတွေက ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမပြောနဲ့
မင်းတို့ကိုပါ စိတ်နားတယ် ရွံ့တယ် သစ္စာဖောက်တွေ မြန်မာနိုင်ငံ မှာမွေးတယ် မြန်မာရေသောက် မြန်မာဆန်ကို စားပြီး မြန်မာစာတွေနဲ့ မြန်မာတွေကို ပြန်ဆော်ကာနေတာတွေကို ပိုလိုစိတ်နာတယ်
အရင်းက မူဆလင်တွေ မြန်မာကို သစ္စာရှိမယ်ထင်ခဲ့တာ.. ရခိုင်ကိစ္စမှ
ပင်ကိုယ် ဗီဇတွေကို မျက်ဝါထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။
အခုဆို မိတ္ထီလာကိစ္စထပ်ဖြစ် အဲဒီတော့ မင်းတို့ကို ပိုပြီးစိတ်နာလာတယ် ပိုရွံ့လာတယ်...နောက်ပြီး ရေကျော် ဗလီ မီးလောင်မှုဖြစ်တော့ မင်းတို့ ဗလောင်ဗလဲ လုပ်ရပ်တွေက ပိုလို့ လူသိလာတယ်။
အဲသလို မြန်မာ-မူဆလင် ပဋိပက္ခတွေနဲ့အတူ အသားထဲကလာက်ကောင်တွေ လည် ပိုစိတ်နာတယ်.. ကိုယ့်အမျိုးသားချင်း ဘက်ကမရှိ ပဲ တခြာသူတွေ ဘက်ကနေ ကာကွယ်ပေးခဲ့တာတွေကို စိတ်နာတယ် ကုလားတွေက သူအမေတတ်--ိုးတော့ကြနေတာပဲ လူ့အခွင့်ရေးခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ
မူဆလင်ကုလားတွေကို ဖူးဖူးမှုတ်ပြီး ကိုယ့်မြန်မာ ချင်းတော့ မကာကွယ်ပေး တဲ့အပြင် ပြောလိုက်တာ ရစရာကိုမရှိဘူး။
နောက်ပြီး မူဆလင်တွေ လူဦးရေးဝါးမြိုလာတာတွေပါ ပိုပြီးသိလာ..အရင်းက မင်းတို့အကြောင်ကို သိမ်မသိတာရော မင်းတို့ပြောနေတဲ့ ငါ့တို့ ဘာသာ ဆိုတာ အေးချမ်းပါတယ်ဆိုတာ အဟုတ်ထင်နေခဲ့တယ် ။
အခုတော့ လက်လန်သွားပြီး မသိတဲ့သူတွေလည် Google မှာ Islami zation တို့Islamic Jihad တို့ Jihad အဲဒါတွေကို ၇ိုက်ထည့်လိုက်တယ် ဆို ပေါ်လာတဲ့ ပုံတွေနဲ့မူဆလင်တွေ ပြောနေတဲ့ အေးချမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေ နဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင့်ဘက်တွေသက်သက်ဆိုတာ တွေ့ရမယ်။
အဲဒီမူဆလင်တွေဆိုတာ ငါ့တို့ပြည်တွင်းနေတွေနဲ့ မတူဘူးဆိုတဲ့ စကားတော့မပြောနဲ့ ကမ္ဘာဘယ်ဒေသက မူဆလင်ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးက တူတူပဲ. စောက်ကျင့်တွေပါ တူတူပဲ။
အဲသလိုတွေ မဖြစ်သေလို့ အေးချမ်းပါတယ်မပြောနဲ့ မင်းတို့မူဆလင်တွေ နယ်ချဲ့နည်း က အင်အားမကောင်းသေတော့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေတွေ ပြောမယ်..50%50ဖြစ်လာတယ်ဆို အသံမားတော့မယ်.. 80%20ဆို ငါ့တို့ကိုခေါင်းဖြက်ပြီး .. အဲသလိုတွေ လုပ်တဲ့ သမိုင်းသက်သေအထောက်ထာတွေ ရှိတယ် လက်ရှိကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတယ် ထိုင်းနိုင်ငံလို ရခိုင်မှာဖြစ်နေတယ်။
ရခိုင်လိုဖြစ်နေတာ နောက်ဆို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဖြစ်တော့မယ်။အရင်ကလည် ဖြစ်ပါတယ် မွန်ပြည်နယ်တို့ ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာပါ ဖြစ်ခဲ့ တယ်။တခြားနေရာတွေမှာလည် ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်တွေဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေက အခုလောက်ထိ မထွန်းကာသေတော့
မင်းတို့ စောက်ကျင့်တွေကို ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဖြစ်နေတယ်
အခုလို အင်တာနက်ခေတ်မှာ ကမ္ဘာကရွာဖြစ်လာတော့ မင်းတို့လုပ်ရပ်တွေစရိုက်တွေ ကို ဖုံဖိမရတော့ဘူး..အခုဆို မင်းတို့ ကုရ်အန်ကျမ်းဆိုတာက အစ ကွန်ပြူတာကနေ ခလုတ်တချက်နှိပ်ပြီး ဖက်လို့ရနေပြီး..။
အဲဒီတော့ ငါက ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် ဘုရားအဆုံးမတွေကို အပြည့်ဝတော့ မကျင့်ကြံနိုင်သေဘူး....ဒါပေမယ့်ဘုရားအဆုံးတွေကို ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ သူတွေ ကျင့်ကြံနေတဲ့ သူတွေနဲ့ သာသနာတော်ကို ကာကွယ်ရမယ့် မကာကွယ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သမိုင်းသက်သေတွေရှိနေတယ်။
ဆိုတော့ကာ ငါရဲ့ဦးတည်ချက်က ဘာလဲဆိုတာ သိခြင်းတဲ့ သူတွေသိလောက်
နော်ဝေမှ ဘရီဗစ်ခ် ကဲ့သို့ မျိုးချစ်လူငယ်များ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သော
11:05 AM အမျိုးသားရေး No comments
ဟိုးတစ်လောက နော်ဝေမှာ ဘရေးဗစ်ဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကလူငယ်အပန်းဖြေ စခန်းတစ်ခုကို ၀င်ရောက်ပြီး ပစ်ခတ်လို့ လူ ၆၀ကျော်သေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရမှာပါ။
ဂေါက်လို့ပဲ ပစ်သလိုလို၊ ရူးလို့ပဲပစ်သလိုလို နဲ့ ဘာကြောင့်ပစ်တယ်ဆိုတာကို သတင်းဌာနတွေက အသေအချာမဖော်ပြကြဘဲနဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ ပဲ ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်အကြောင်းအရင်းမှန်က မွတ်စလင်တွေ လူနဲ့ မျိုနေတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ ဘရေးဗစ်က မရိကန်ပညာရှင်တွေတွက်ချက်ပြထားတာကို
သွားဖတ်မိလိုက်တော့ ငါတို့ဥရောပကြီးတစ်ခုလုံးကို မွတ်စလင်တွေက သွေးတစ်စက်မှ မြေမကျစေဘဲ အေးအေးလေး နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ၀ါးမျိုနေပါလား ... နောက် အနှစ် ၄၀ လောက်ဆိုရင် ဥရောပကြီးတစ်ခုလုံး မွတ်စလင်အင်ပါယာအောက် ကို ရောက်တော့မှာပါလားဆိုတာကို
သူနားလည် သွားတော့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ထပေါက်ကွဲသွားတာပါ။
သူသွားပစ်သတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာက မွတ်စလင်လူငယ်အများစုရှိနေတဲ့ လူငယ်အပန်းဖြေ စခန်းပါ။...လုပ်ရပ်ကမှားပါတယ်။
မြန်မာလူငယ်များအတုမယူကြပါနဲ့။ အတုယူမှားမှာစိုးလို့ သတင်းဂျာနယ်တွေ မှာ မဖော်ပြ တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဘာကို ပြနေသလဲဆိုတော့ လုပ်သင့် တာကို အချိန်မီ မလုပ်ခဲ့ရင် နှောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းမှန်ကန် တဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေကို ရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ ပြင်သစ်ကိုလည်းသိပ်တော့အထင်မကြီးကြပါနဲ့။
သူလည်းမွန်စလင်အင်ပါယာအောက်ရောက်ခါနီးမို့ အသက်ငင်နေပါပြီ။ Multiculturism ဆိုပြီး ကုလားတွေခေါ်သွင်းလာလိုက်တာ မကြာခင်မှာပြင်သင်လူမျိုးက လူနည်းစု၊ ကုလားကလူများ စုဖြစ်ပြီးး ၂၀၈၀ ဆိုရင် ပြင်သစ်ပြည်ဆိုတာ လုံးဝပျောက်ဆုံးပြီး Islamic Republic of France ဆိုတာပေါ်ထွက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြင်သစ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေက မယောင်ရာ ဆီလူး၊ သေခါနီး သွေးရူးသွေးတန်း လုပ်မိလုပ်ရာ လျှောက်လုပ်နေတာပါ။ အခုမှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ နှင်ထုတ်လည်း အရမ်းကို
နောက်ကျသွားပါပြီ။ ဥရောပသားတွေ အရမ်းကိုနောက်ကျနေပါပြီ။ ကျွန်တော်ပြောဖူးသလို သူတို့တီထွင်ကြံဆထားခဲ့တဲ့ သီအိုရီတွေ၊value တွေနဲ့ပိတ်မိနေတာဖြစ်တဲ့ အပြင် မွတ်စလင်တွေရဲ့ ချိမ်းခြောက်အန္တရာယ်ပေးမှုတွေကို စိုးရိမ်နေရတာတွေကြောင့်လည်း ပီပီပြင်ပြင် မလုပ်နိုင်တော့ တာပါ။
Freedom of Speech ဆိုတဲ့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေ လှိုင်လှိုင်ပေါကြွ ယ်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေ မှာ မွတ်စလင်တွေ အကြောင်းကို ရဲရဲကြီး ဝေဖန်ရဲတဲ့သူတွေ နည်းနည်း လာတာ ကတော့ သင်ခန်းစာ ယူစရာကောင်း လှပါတယ်။ သူတို့ဆီက အဖြူပညာရှင်တစ်ယောက်က ဘယ်လိုထောက်ပြထား သလဲဆိုတော့ ...
ငါတို့ အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား အားသာချက်ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ Freedom ဖြစ်သလို၊ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ ဒီ ဒီမိုကရေစီနဲ့ Freedom တွေကပဲ ငါတို့ရဲ့အားနည်းချက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ၀န်ခံထားပါတယ်။
(ကျွန်တော်ဟာ ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုးသူပါ။ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်သူလို့ မမြင်စေ ချင်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီရဲ့အားနည်းချက်ကို ကြိုတင်သိမြင်ပြီး ကြိုတင်ဖာထေး သင့်တဲ့အကြောင်း သတိပေးတာပါ)
ကျွန်တော်ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားမိတာက ကုလားတွေဟာ ဒီမိုကရေစီကို cover ယူလှုပ်ရှားနေတာပါ။ အခုဆိုအန်တီစုကို cover ယူသွားပြီ။ သူရထားတဲ့ ဆုတွေဟာ သူ့ကိုအကျဉ်းအကျပ်ဖြစ်စေပြီ။ ကျွန်တော်တို့အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့အားနဲချက်နဲ့အတူ မပျောက်ကွယ်စေချင်ပါဘူး။
ကမ္ဘာကျော် မွတ်ဆလင် ဦးနှောက်
11:03 AM ကုလားတို့ အကြံများ No comments
အတော်လေးလည်း လေးစားစရာကောင်းတဲ့ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ပါလား...
အာလာ ဖန်ဆင်းထားပြီး မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒိုင်နိုဆော တောင် အပြစ်မကင်းပါလားနော်...... ဘာတွေစားထားတဲ့ ဦးနှောက်မျိုးပါလိမ့်.....
၃ ။ ဒိုင်နိုဆော အဖိုရောအမပါ ဟီဂျပ် (hijabs) တွေ မပါလို့ တဲ့။
“ရွှေမြန်မာတို့သတိထားသင့်သည့် လူက လူကိုမျိုခြင်း
10:58 AM အမျိုးသားရေး No comments
“ရွှေမြန်မာတို့သတိထားသင့်သည့် လူက လူကိုမျိုခြင်း”
“ဒီနေရာလေးမှာ မြေမျိုလို့ လူမျိုးမပြုတ် လူမျိုမှ လူမျိုးပြုမည်” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို အများနားလည် သဘောပေါက်အောင် အနည်း ငယ်လောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများ နားလည်ထား တာက “လူကို မြေက မျိုတယ်” လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဘုရားဟော ကျမ်းဂန်တွေ ထဲက ရှင်ဒေဝဒတ်ကြီး မြေမျိုခံရတာ၊ ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီဝတ္ထုထဲက နန္ဒလုလင်မြေမျိုခံရတာ၊ နောက်ပြီး သုပ္ပဗုဒ္ဓဘုရင်ကြီး မြေမျိုခံရတာ စတဲ့ အကုသိုလ်ကံ ကြီးမားလို့ အရှင်လတ်လတ် မြေမျိုခံ ရတာကို ပြေးပြီး မြင်ကြ ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မိဘကို ပြစ်မှားလို့ အရှင်လတ်လတ် မြေမျို ခံရတဲ့ တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာလေးမှာ သိစေချင်တာက သက်ရှိထင်ရှားလူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အရှင်လတ်လတ် မြေမျိုမှ မြေမျိုတယ်လို့ ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ဝိညာဉ်ချုပ်နေတဲ့ သူသေအလောင်းကောင်ကို တွင်းတူးပြီး မြေကြီး ထဲ မြှပ်ပစ်လိုက်တာဟာလည်း မြေကြီးက လူကိုအကောင်လိုက် မျိုလိုက် တာပါပဲ။ ဒီလို ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း နှစ်စဉ် တစ်နေ့တစ်နေ့ လူတွေကို မြေကြီးက ဝါးမျိုလာလိုက်တာ ဂဏန်းသင်္ချာ ရေတွက်ပြဖို့ရာပင် မစွမ်းနိုင်လောက်တဲ့ အထိ ရှိခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် မြေကြီးက မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားလှတဲ့ လူတွေကို မျိုသွားလို့ ဘယ်လူမျိုးတွေတော့ မျိုးပြုတ်သွားပြီ၊ ဘယ် ဘာသာဝင်တွေတော့ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ မြေကြီး ကတော့ ယခင်ကလည်းသူသေကောင်တွေ မျိုလာခဲ့သလို နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်အောင်လည်း မျိုနေဦးမှာပါပဲ။
နောက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ သာဓကတစ်ခုကို ပြောပါဦးမယ်။ ကမ္ဘာ့လူသတ်ကောင်လို့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင် ဟစ်တလာဟာ သန်းပေါင်းများစွာသော ဂျူးလူမျိုးတွေကို ကမ္ဘာပေါ်မှ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိတဲ့အပြင် ဂျူးလူမျိုးတွေ ဟာ အစ္စရေးဆိုတဲ့ ဂျူးနိုင်ငံကိုတောင် ထူတောင်နိုင် ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောလိုရင်းကတော့ လူမျိုးတစ်မျိုးကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ပျောက်ကွယ် သွားတယ်ဆို တာမျိုးလည်း မရှိခဲ့သလို၊ မြေက မျိုလို့ မျိုးတုံးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူက လူကိုမျိုလို့ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ဖူးတဲ့ လူမျိုးတွေကတော့ ကမ္ဘာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား များစွာမှ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနေရာလေးမှာ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ သင်္ကေတကို ဘာသာ တရားနဲ့ပဲ တိုင်းတာပြချင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ သင်္ကေတကို ဘာသာတရားနဲ့ ဘာလို့တိုင်းတာပြရတာလဲလို့ဆိုရင် လူတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာတရားတစ်ခုခု ရှိနေကြလို့ပါပဲ။
(ဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့သူလူတွေ ရှိနေကြပေမယ့် ဘာသာတစ်ခုခုကို ယုံကြည်နေတဲ့ လူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် လွန်စွာမှ နည်းပါးလွန်း လှပါတယ်။)
ဥပမာပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ များသောအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အများဆုံး နေထိုင်ရာ နိုင်ငံဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်အဖြစ်ကိုလည်း ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ တစ်ချိန်က အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်ထိလည်း ဘယ်လိုမှငြင်းပယ်လို့မရနိုင်တဲ့ သက်သေအထောက် အထားတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။အဲဒီလိုပါပဲ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၊ အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဟာလည်း တစ်ချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများဆုံး နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတော်အဖြစ် ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘသာာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းအထောက်အထားတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေ ဟာ ယနေ့အချိန်ထိ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ အထင်အရှားရှိနေကြတုန်းပါပဲ။
ယနေ့အချိန်မှာတော့ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမျိုးတွေ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မျိုးဆက်သစ်တွေ ရှိကြသေးရဲ့လားလို့ဆိုရင် အဖြေကတော့ မူးလို့တောင် ရှူစရာမရှိတော့ဘူးလို့ ဖြေရမှာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျိုးဆက်တွေ ဘယ်ရောက် သွားကြကုန်ပါသလဲ၊ မြေကြီးက မျိုလို့ ပျောက်သွားကုန်ကြတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားဘာသာဝင်လူမျိုးတွေက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ် မှုတွေကြောင့် ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားကြကုန်တာလား။
အဖြေကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ၊ မြေကမျိုလို့ မျိုးပြုတ်သွားခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ “မြေမျိုလို့ လူမျိုးမပြုတ်၊ လူမျိုမှ လူမျိုးပြုတ်မည်” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ထဲက စကားလို လူကလူကိုမြိုလို့ အားလုံးမျိုး တုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဖိုးပညော(သပိတ်ကျင်း)၏
စာဖတ်သူအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီးလိုရာဆန္ဒများ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြည့်ဝကြပါစေ။
10:56 AM ကုလားတို့ အကြံများ No comments
............ လက်ထိပ် (သံမဏိ) ကိုတောင် ချိုးပြီး ပြုတ်အောင် ဖြုတ်နိုင်တယ်......... ။
အခိုင်အမာ လုပ်ထားတဲ့ အချုပ်ခန်းအတွင်းကနေ ထွက်ပြေးလို.ရအောင် ရတဲ့အခွင့်အရေးကို အသုံးချတတ်တယ်။
သူတို.အမျိုးတွေလာရင် သနားစရာ မျက်နာထားတွေနဲ. ငိုချင်းချပြီး သူတို.အတွက် အခွင့်အရေးကို ရအောင်တောင်းတတ်တယ်။
သူတို.လိုချင်တာ ပေးအောင် ဆန္ဒလဲပြတတ်တယ်။
သူတို.ကိုချုပ်ထားတဲ့ အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာ ညစဉ် သူတို.အချင်းချင်း ရန်ပွဲဖြစ်လေ့ရှိကြတယ်။
သူတို.တွေဟာ လူညီရင် ဤ ကိုကျွဲ ဖတ်တတ်ကြတယ်
သူတို.တွေဟာ အိပ်/စား/ကာမ ဆိုတာတွေကို ပဲ တပ်မက်ပြီး ပျင်းရိသူများဖြစ်ကြတယ်........။
ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ သူတို.ဟာ သွေးဆာ နေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေဆိုတာကို နိုင်ငံတကာ ကသိနေပေမဲ့ ........ပြစား တောင်းစား ဂွင် ကောင်းလေးများရနေတာမို. လူ.သားချင်းစာနာမှု. ၀တ်ရုံ ကိုခြုံ လူ.အခွင့်အရေး မျက်နာဖုံးတွေနဲ. မချစ်သော်လဲ အောင့်ကာနမ်းနေကြလေရဲ. ........
အဲလိုလူတွေ ထဲမှာ မြန်မာပြည်က အချို.သော ငနဲသားတွေတောင်ပါလေရဲ. .............
သြော် ......ဂွင် .......ဂွင်................ငွေ ..........ငွေ
ICအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးကြပါနဲ့ 
10:55 AM အမျိုးသားရေး No comments
OICအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရသောကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြမည်
OICအဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်တောင်းရာ ရဟန်းသံဃာ ပြည်သူလူထုမှ ကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒပြပွဲ များပြုလုပ်သောလည်ကောင်
ကန့်ကွက်စာများ ပို့၍ ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် OICအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရသောကြောင့်
ယခုအခါထပ်မံ၍ ဝင်ခွင့်ရရင် မူဆလင်ကုလားဆိုးတို့မှ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာ စွာဖြင့် OICအဖွဲ့ဝင်ခွင့်ရရန်ပြည်တွင်း ပြည်ပ မူဆလင်အဖွဲ့ စည်းအသီးသီး တို့ မှ မန္တလေးမှ မူဆလင်ကျောင်းသားများကို လှုံ့ဆော်သွေးထိုးမှုများ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ပြီး မြန်မာအစိုးရကို ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွင် ဆူပူမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိနေပါသည်။
ထို့သို့ မူဆလင်များမှ OICအဖွဲ့ဝင်ခွင့်ရရင် ဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်ပါ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားများလည် မြန်မာနိုင်ငံကို သစ္စာဖောက် အမေကိုကျော်ပြီး ဒွေတော်လွမ်းနေသည့် မူဆလင်ကုလားဆိုး တို့၏ OIC အဖွဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန် ဆန္ဒပြပွဲကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့်
တန်ပြန်ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်ကြိုတင်၍ ပြင်ဆင်ထားကြ ပါရန် အလေးနက်ထား၍ သတိပေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါသည်။
10:52 AM အမျိုးသားရေး2comments
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဘာသာခြား (အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင်)ကို မယူဘဲ ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေကိုပဲ ယူဖို့အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ခွင့်မရမှာစိုးလို့ပါ။ ခရစ်ယာန်၊ဟိန္ဒူတွေကို ယူရင်တောင် ကိုယ်ယုံကြည်ရာဆက်ကိုးကွယ်ခွင့်ရနိုင်သေးတယ်။မွတ်ဆလင်ကိုယူရင်
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆက်ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ အစ္စလာမ်ကျမ်းစာအရလည်း ဘာသာခြားတစ်ယောက်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို မ၀င်ဘဲ တရားဝင်မယားမဖြစ်ပါဘူး။
ယူပြီးရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆက်ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာလည်း လိမ်ညာတာတွေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ယူပြီး ဗုဒ္ဓ ဘာသာကိုကိုးကွယ်ခွင့်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတာလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ တစ်သောင်းမှာ တစ်ယောက်ရှိဖို့တောင် အင်မတန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဘာသာခြားတွေကို စီးပွားရေးမပတ်သတ်တာ ၇၈၆ဆိုင်မှာ မ၀ယ်တာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုအရေးကြီးတာက (ကိုယ့်ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်လုံးဝမပေးတဲ့ )ဘာသာခြားကို မယူဖို့ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ သရဏဂုဏ်ပျက်ရင် သံသရာမှာ အလွန်နစ်နာပါတယ်။
ဘုရားပွင့်တာကို ကြုံကြိုက်ဖို့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဒုလ္လဘအင်မတန်ခဲယဉ်းတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်လို့ ဒါကိုတန်ဖိုးထားပြီး ဘာသာခြား(အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင်တွေ)ကို လက်မထပ်ဘဲ ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလိုပြောတာဟာ ဘာသာရေးလူမျိုးရေးခွဲခြားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုန်ရမ်ကျမ်းမှာကို မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူကို လက်ထပ်ခွင့်မပေးထားလို့ ဒီပို့စ်ဟာ မွတ်ဆလင်တွေကို သူတို့ကျမ်းဂန်အဆုံးအမနဲ့အညီနေဖို့ ကူညီရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ပါတယ်စာအုပ်နဲ့ဖိုးပညောရေးတဲ့ စာအုပ်ထဲက ဇာတ်လမ်းတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ဒီပို့စ်နဲ့သက်သေပြလိုက်ပါတယ်။
ကျုပ်မှာလည်းရေးစရာတွေ ပြောစရာတွေရှိပါတယ်ဗျာ ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းတယ်ထင်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူး နောက်လူတွေအတွက် ပြောပြရတော့မယ်
ကျွန်တော့အမေရဲ့ညီမအရင်းဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့အဒေါ်က မိုးကုတ်သွားရင်း ရွှေဘိုနားက မွတ်ဆလင်တယောက်နဲ့အကြောင်းပါသွားတယ် ကျွန်တော်မမွေးခင်ကဆိုတော့ အမေကြီး အဖေကြီးတွေ အမျိုးတွေက ဆွေမျိုးဖြတ်လားမဖြတ်လားမသိခဲ့ပါ ကျွန်တော်အရွယ်မရောက်ခင်ထဲက အမျိုးတွေနဲ့အ၀င်အထွက်အမြဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆွေမျိုးသံယောဇဉ်ကြောင့်ထင်ပါတယ်။
ပြောရရင်အရှည်ကြီးမို့ လိုရင်းပဲရေးပါရစေ။ အိမ်မှာအ၀င်ထွက်လုပ်တာက လုပ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ၁ယောက်ထဲပဲလာလာ အသိမိတ်ဆွေခေါ်ပြီးလာလာ ကျွန်တော့အမေ သူ့အမချက်ကြွေးတာကို ဘယ်တော့မှမစားပဲ ကိုယ်ပိုင်းဟင်းချက်ပြီးထည့်လာပါတယ် ၄/၅ရက်လောက်လာတယ်ဆိုရင်လဲ ထမင်းဖြူကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ဟင်းမစားပါဘူး ဘာကြောင့်ဒီလောက်အယူသီး အစွဲကြီးသွားမှန်း စဉ်းစားမရအောင်ပါပဲ ။အဲအချိန်က ကိုယ်ကလည်း ကလေးသာသာဆိုတော့ မေးရမှန်းမသိသေးဘူးလေ။
အဒေါ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့် မသိမသာပဲနေခဲ့ရတယ် အဆိုးဆုံးတခုကတော့ မြစ်ကြီးနားကိုသွားပြီး အထည်ရောင်းကြတော့ မွတ်ဆလင်အဒေါ်ရယ် သူ့အမ ကျွန်တော့အမေရယ် ကျွန်တော်ရယ် ၃ယောက်သွားကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့သူက ကျမ္မာရေးဖောက်တယ်။ ဒါနဲ့ ရွာထဲက ဆေးဆရာခေါ်ပြီးဆေးထိုးဖို့ ဆေးဆရာသွားပင့်လာကြတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဆေးဆရာက မုတ်ဆိတ်ရှည်နဲ့ကုလားကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဆေးဆရာအိမ်ပေါ်ရောက် လူနာကိုဆေးထိုးမယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဆေးဆရာ မုတ်ဆိတ်က တခုထပြောလိုက်တာ ကိုယ်တောင် အံ့သြသွားတယ်။ ဘာပြောတယ်ထင်လည်း ဘုရားဂုဏ်တော် တရားဂုဏ်တော်လေးအာရုံပြုလိုက်ပါတဲ့။
အဲမှာ ဇာတ်လမ်းကတော်တော်ကောင်းသွားတာပဲ ဆေးဆရာမုတ်ဆိတ်က မွတ်ဆလင်ကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောင်းထားတာတဲ့။ ဆေးထိုးခံမယ့် ကျွန်တော့အဒေါ်က ဗုဒ္ဓဘာသာကနေ မွတ်ဆလင်ကို ပြောင်းထားတာ ။မွတ်ထဲဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ခပ်တင်းတင်းခပ်ပြတ်၂ပဲပြောချလိုက်တာ(အဒေါ်ဖြစ်သူက ) `` ကျမ အဲလိုမလုပ်နိုင်ဘူး ကျမက မွတ်ဆလင် ဘုရားတရားအာရုံမပြုနိုင်ဘူး ဆရာတဲ့ဗျာ ""
ကျွန်တော့အသိစိတ်ထဲမှာ အဒေါ်လို့သတ်မှတ်ချင်စိတ်ကို မရှိလောက်အောင်ပဲဗျာ အခုတော့ ဆုံးသွားရှာပါပြီ ။ ဘယ်အရွယ်ရောက်မှပဲ ၀င်သွားဝင်သွား ကိုယ့်မိခင်ဘာသာတရားကို အဆုံးတိုင်ခြေဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် နောင်လာမယ့်ကလေးတွေကော အခုအရွယ်ရောက်နေသူတွေပါ နမူနာယူကြစေချင်ပါတယ်
Nan Htike Ye
တို့သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ် သူက စလုံးမှာစကော်လာရလို့ကျောင်းတက်ပီး အဲမှာကျောင်းလာတက်တဲ့ မွတ်နဲ့ကြိုက်တော့တာဘဲ နောက်တော့ဘာဆက်ဖြစ်တယ် မသိ..ဟိုတလောက တိုက်ပေါ်က ခုန်ချပီး အဆုံးစီရင်သွားလေရဲ့..(သူပြောဖူးတာတော့ သူချစ်သူက cherry oo နာရီဆိုင်က တူတဲ့လေ ဟာဂျီတွေပေါ့)
( မ Nan Hike Ye ရေးတာဖတ်ရမှ စင်္ကာပူမှာ တိုက်ပေါ်ကခုန်ချသေသွားတဲ့မြန်မာမလေး ရင်ငြိမ်းပွင့် ဘာကြောင့် သတ်သေတယ်ဆိုတာ သိတော့တယ်။ ကျေးဇူးပါ။
အောက်ပါလင့်ကမရင်ငြိမ်းပွင့် နောက်ဆုံးရေးသွားတဲ့ နုတ်လေးပါ။
ဒါက သူ့အတွက် အမှတ်တရ page ပါ
အမျိုးထဲကတယောက်ပေါ့ မိဘတွေနဲ့မောင်နှမတွေက ဘာသာရေးတော်တော်လေး လိုက်စားတယ် ကောင်းမလေးကလည်းဘာသာရေးလိုက်စားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်လောက်ကပေါ့ သူမက၁၉နှစ်နဲ့တူတယ် အရွယ်ကငယ် ရုပ်ကချော သွက်လက်ချက်ခြာတော့ အားလုံးကဖူးဖူးမှုတ်ထားတယ်။ မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ ဟော်တယ်တခုမှာ ဧည့်ကြိုလုပ်တယ် ။ပိုင်ရှင်ပြောင်းတော့ သူဋ္ဌေးမွတ်ဆလင်ပေါ့ သဘောတော့ကောင်းပုံရတယ်လို့ထင်ရတယ်သူဋ္ဌေးရဲ့တူက ကုလားဖြူ တော်တော်လေးသန့်တယ် သဘောကောင်းပုံပြ ဆိုင်ကယ်တကားကားနဲ့လက်ဆောင်တွေအမျိုးမျိုးပေးနဲ့နောက်ဆုံးတော့ 
ကောင်မလေးကို သူ့အကောင်ကလေးက ကိုယ်ကြိုက်တာကိုးကွယ်ကြေးပေါ့။ ဒါပေမယ်လို့တခုတော်သေးတာက ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ် မကြာပါဘူးထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ရွှေငွေတွေပြ ဘာသာထဲဝင်ဖို့စည်းရုံးတယ် မရတော့ခြိမ်းခြောက် တယ်။ ကောင်မလေးကနောက်ဆုံးသည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ ဆွေမျိုးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကွာရှင်းခဲ့တယ် ကုလားကတော်တော်နဲ့တော့ဇွဲမလျှော့ဘူးလေ။ အခုတော့ ကိစ္စတွေကပြီးသွားပေ့မယ့် မမေနိုင်သေးဘူးလေ တတ်နိုင်သလောက်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုသတိပေးနေတယ် အတိုခြုံးပြီးရေးထားတယ်။
ကျွန်တော့ အဒေါ် အရင်းပါ။ အမေရဲ့အစ်မပါ။ ခိုးပြေးတော့ မိန်းကလေးဖက် ကသဘောမတူလဲ ပေးစားရတော့တာပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း ကြိုက်တာကိုးကွယ်ခိုင်းပြီး ညားလဲပြီးရော ကုလားထဲဝင်ရမယ်တဲ့။ တလင်တမယားစနစ်ကို တန်ဖိုးထားတော့ သူ့ယောကျာင်္းနဲ့ ညှိတာပေါ့။ အဲ့တော့ အသက်၄၀ ကျမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့။ ဒါလဲ အဒေါ်ကလိုက်လျောတယ်။
ကုလားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ ယောင်္ကျားလေး တွေ မွေးမွေးချင်း ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ (ရှင်ပြုတယ်)ပေါ့။ ကလေးတွေကို သေသေချာချာ စည်းရုံးတယ်။ အခုအဒေါါ အသက်ခြောက်ဆယ်ပြည့်တော့မယ် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ခွင့် မပေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၉၆၉ ( ဘုရားဂုဏ်တော်၉ပါး၊ တရားဂုဏ်တော်၆ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏ်တော် ၉ပါး) ကိုသာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ အဒေါ်ကနောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ ညှိမရတဲ့ အဆုံး သားတွေကို ရှင်ပြု အလှူလုပ်တယ်။ အခုတော့ သားသမီးတွေပါ ဗမာယောင်္ကျားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး တအိမ်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ပဲ ကိုးကွယ်ကြတယ်။
Htin Kyaw Lynn
ကိုယ်တွေ့တစ်ခုပြောပြမယ်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း။ မွတ်ဆလင်အစစ်။ အဘိုးက ဗလီ ဥက္ကဋ္ဌ။ ကောင်မလေးက ဗုဒ္ဓဘာသာ။ ကောင်မလေးက သူ့ရည်းစားကို မွတ်ဆလင်မို့လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မပြောင်းရင် မယူဘူးလို့ အတင်းငြင်းထားတယ်။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက အရှေ့ကျ ဘုရားရှိခိုးပြ အလှူတွေ ဘာတွေ လိုက်နဲ့။ ကွယ်ရာ ကျဘာပြောတယ်ထင်လဲ??? အဲ့ကောင်မလေးကို ငါမသိမ်းပိုက်ရသေးလို့တဲ့။ သိမ်းပိုက်ပြီးရင် ငါ့ဘာသာပြောင်းခိုင်းမှာတဲ့။ မရရင် ပြတ်ပေါ့တဲ့။ ငါက အသာကြီးပဲတဲ့။ လူသတ်ချင်စိတ်ပါပေါက်တယ်။ အဲ့တုန်းက။ ကောင်မလေးကို ပြောပြတယ်။ မရတော့ဘူး။ ဘုရားရှိခိုးပြတာကိုး။ ကောင်မလေးတွေ သတိထားစေချင်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ် ကျွန်တော် ၈ တန်း နှစ်မှာ ကိုယ်တော့်ဂရုဏာ (အနီရောင်စာအုပ်) နဲ့ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ (အပြာရောင်စာအုပ်) ဖတ်ပြီးကတည်းက မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ခဲ့တာပါ ဒီလိုပြောလို့ ဂုဏ်တင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ပြောချင်တာလေးတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ပါ ဒီ ၁၇ နှစ်အတွင်းမှာ လူပေါင်းများစွာကိုဆန့်ကျင်ရေးတရားပြောခဲ့ပါတယ် အနည်းအကျဉ်းမှအပ အများစုမှာ ကျွန်တော်ပဲ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူလိုလို အစွန်းရောက်သူလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ပြောချင်တာက ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်ရင် မဆိုင်သလိုနေတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ် ကိုပါ။ (အဲ့ဒါကိုတောင် အခုဒီခေတ်မှာ မေတ္တာသမားလိုလိုပုံဖျက်ထားသေးတယ် )
ကျွန်တော်ကတော့ အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာတွေဟာ မကောင်းတာမှန်ပေမယ့် အခြားတစ်ဘက်ကလှည့်တွေးရင် ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ အေးဆေးလွန်းတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကို နိုးကြားရာရောက်စေတယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ် ။ ၁၇ နှစ်အတွင်းမှာ မွတ် ယူတဲ့ ဇတ်လမ်းတွေ တော်တော်များများကြုံဖူးပါတယ် အစပိုင်း ဇတ်ကွက်တွေမှာတာ ကွဲပေမယ့် နောက်ပိုင်း မွတ်ဘာသာကိုပြောင်းရတာမှာတော့ အတူတူပါပဲ စောစောပြောင်းရတာနဲ့ နောက်ကျပြောင်းရတာပဲကွာပါတယ်။
ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာတစ်ခုက ကျွန်တော်လိုပဲ မွတ် ကိုမုန်းတဲ့ အသိအစ်မတစ်ယောက်က နောက်ဆုံးမွတ်ကိုယူသွားတာပါ။ သူတို့မှာ ပရိယာယ် အရမ်းများပါတယ် ဘာလုပ်ပြပြ မယုံသင့်ပါ။ မုန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတောင် သိမ်းသွင်းနိုင်ပါတယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ မနေသင့်ပါ ။ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာပါ မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ မြင်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်တာလုပ်ကြဖို့ပါပဲ ကာကွယ်သင့်တာ ကာကွယ်ရမှာပါ ။ တခြားနောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်တာတွေ လှုံ့ဆော်တာတွေ စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး ရန်စဖို့မဟုတ်ပါ ကိုယ့်စည်းကို လုံဖို့လုပ်ကြရမှာပါ။
Lomevaa Nii ကျနော့အဒေါ်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ကုလားနဲ့ယူသွားတယ်အမျိုးတွေကဆွေခန်းမျိုးးဖြတ်လိုက်တယ် သု့မိဘကတော့သားသမီးကိုမပြတ်နိုင်တော့လက်ခံပါတယ် ဒါပေမဲ့ကုလားကအကျင့်ယုတ်တယ်ကျနော်တို့နဲ့အရောတဝင်နေတာသဘောမတူဘူးကျနော်တို့ကလည်းဝမ်းကွဲပေမဲ့အရင်းလိုပါပဲ ပြောချင်တာက အဒေါ်ကိုမေးကြည့်တယ် မွတ်စလင်ဇာတ်ထဲဝင်တဲ့သူကိုဗုဒ္ဓဘုရားပုံနင်းခိုင်းတယ်ဆိုဟုတ်လား အဲဒီတော့
သူမကဖြေတယ် အကြောက်အကန်ငြင်းရင် နည်းတစ်မျိုးသုံးတယ်တဲ့ အမှောင်ထဲဘုရားပုံချထားပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာယူခိုင်းတာနင်းပြီဆိုတာနဲ့ကဲနင်တို့
မွတ်ဇာတ်ဝင်သွားတယ် ဖြီးဖြန်းရေးတာမဟုတ်ပါ ကိုယ်တွေ့စစ်စစ်ဖြစ်ပါသည် ကာယကံရှင်များမသေသေးပါကိုယ်တိုင်ဗျူးချင်သူများ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါမည်
(မှတ်ချက်။ ဒီပို့စ်သည် ဖြိုးငွေစိုးအကြောင်းရေးတာ မဟုတ်ပါ။ သူ ဗုဒ္ဓ ဘာသာလား မွတ်ဆလင်လား စိတ်မ၀င်စားပါ။ ပို့စ်တင်ဖို့အတွက် ပုံတစ်ပုံထည့်ဖို့လိုလို့ မြန်မာ့ရိုးရာမင်္ဂလာစုံတွဲပုံလေးတွေလို့ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပို့စ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသာဖတ်စေလိုပါတယ်။)
မြန်မာပြည်အရေး OIC ပါဝင်ရန် မလိုအပ်လို့ သမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြတ်ပြတ်သားသားပြောပြီ။
10:49 AM အမျိုးသားရေး No comments
မိတ္ထီလာနှင့် ပဲခူးတိုင်းအတွင်း နေရာတချို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးသာ ဖြစ်၍ အစ္စလမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့(OIC) အနေဖြင့် ပါဝင်ပတ်သက်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူက ပြောဆိုလိုက်သည်။
အစ္စလမ်နိုင်ငံ ၅၇ နိုင်ငံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော OIC အဖွဲ့၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတခုကို ဆော်ဒီ အာရေးဗီးယား နိုင်ငံ Jeddah မြို့၌ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ၀န်ကြီးအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ သို့ လာရောက်ခွင့်ပြုရေး ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ သတင်း မီဒီယာများ၌ ရေးသားထားသည်။
မြန်မာပြည်တွင်း ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများကလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေ ချိုးဖောက်သူများအား အရေးယူခြင်း၊ ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည် နေရာချထား ရေး အစီအစဉ်များ စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သမ္မတ ပြောခွင့်ရသူ က ပြောဆိုသည်။
မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားသည့် မိတ္ထီလာ ပြဿနာသည် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ OIC အဖွဲ့က ပါဝင်ဖြေရှင်းရန် မလိုအပ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ ရုံးခန်းဖွင့်ခြင်းများလည်း လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ပခုက္ကူမြို့ မှ ရှင်မတောင် ဆရာတော် ဦးက၀ိန္ဒောဘာသ က ဧရာဝတီ ကို မိန့်ကြားသည်။
“OIC ကို လက်မခံဖို့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီဒေသက မြို့နယ် ၈ ခုက သံဃာတော်တွေ စုပေါင်းပြီးတော့ သမ္မတရုံး ကို စာပို့ ထား တယ်၊ ပြည်သူတွေရဲ့အသံကို နားထောင်ပြီးမှ ပို့တဲ့စာ ဖြစ်လို့ သမ္မတ အနေနဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အလေးထားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် တယ်”ဟု ဆရာတော်က မိန့်သည်။
OIC အဖွဲ့အား လက်မခံရေး ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပခုက္ကူ၊ မုံရွာ၊ ဆားလင်းကြီး၊ ရေနံချောင်း၊ ချောက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ မြိုင်၊ ရေ စကြို စသည့်မြို့နယ်များမှ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံးသို့ ပြီးခဲ့သည့် ၃ ရက်ခန့်က စာပေးပို့ထားကြောင်း၊ တခြားဒေသများမှ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များကလည်း အလားတူ ဆန္ဒသဘောထားများ ပေးပို့ကြမည်ဟု ယူဆကြောင်း လည်း ဆရာတော် ဦးက၀ိန္ဒောဘာသ က မိန့်ကြားသည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် နာရီပိုင်းအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတပါး တိုက်ခိုက်ခံရ၍ သေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် အကြမ်းဖက် တိုက် ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားကာ လူပေါင်း ၄၀ ကျော်သေဆုံး၍ ရာနှင့်ချီသော အိုးအိမ်နှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ မီးလောင်ပျက် စီး ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် မွတ်စလင် ဘာသာဝင် စုစုပေါင်း ဒုက္ခသည် ၃ သောင်းနီးပါး ရှိခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများအပြီးတွင်လည်း OIC ၏ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ရုံး တရုံး မြန်မာပြည်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် မြန်မာအစိုးရနှင့်သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း OIC အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးရုံးက ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သေးသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ဒေသ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်း ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် OIC ရုံးဖွင့်ရေးကို အစိုးရ က ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ရသည်။
10:46 AM ကုလားလုပ်ရပ်များ No comments
မြန်မာပြည်မှာအဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်ရင် ပြဿနာစတင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို အပြစ်မပြောဘဲ ဒါဟာ အစိုးရလှည့်ကွက်တွေ၊ ဒါဟာ ၉၆၉ အဖွဲ့တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဒါဟာနိုင်ငံရေးနောက်ကြောင်းပြန်ချင်သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဆိုပြီး ပြောဆိုဝေဖန်နေကြသူများခင်ဗျာ
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘော့စတွန်မြို့မှာ မွတ်ဆလင်အကြမ်းဖက်သမားနှစ်ယောက်ဗုံးခွဲတဲ့ကိစ္စရော မြန်မာအစိုးရလှည့်ကွက်တွေဖြစ်နေပါသလား၊ ၉၆၉ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်နေပါလား...
သူတို့လုပ်ရပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရော တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ။
နိုင်ငံအသီးသီးမှာဖြစ်နေတဲ့ အသေခံဗုံးခွဲမှုတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေကရော မြန်မာအစိုးရလှည့်ကွက်တွေဖြစ်နေပါသလား၊ ၉၆၉ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်နေပါလား...
website ဆောက်နည်း (1)
ကုလားတို့ အကြံများ (3)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဘာသာခြား (အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင်)ကို မယူဘဲ ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေကိုပဲ ယူဖို့အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ...
အစ္စလာမ်သည် ဘာသာတရားတစ်ခုမျှသာမဟုတ်သော ..Totalitarian Ideology အစ္စလာမ်သည် သန်းပေါင်း ၁၇၀၀ သောလူသားတွေရဲ့ ဦးဏှောက်ထဲကိုကူးစက်ပြ...
U Aung Hlaing U မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူမှ လူမျိုးမတူ တာနဲ့ မမုန်းပါဘူ။ (သူ့ နိုင်ငံမှာပဲ သူနေရင်ပေါ့။) ဘာသာ မတူတာလဲ မမုန်းပါဘူး။ (သူ့ဘာသာ...
(မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသိနည်းနေသေးသော ဖြစ်ရပ်မှန်များ)
(မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသိနည်းနေသေးသော ဖြစ်ရပ်မှန်များ) ရခိုင်ပြည်အတွင်း၊ ကုလားတန်မြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းနှင့်၊ နတ်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်း ”ကြားဒေသ” ...
ဆရာတော် ဝိရသူ ဟောသွားတာတော့ ဘာသာ၊ သာသနာကို စောင့်ထိမ်းဖို့ပဲ....... ဘာသာ၊ သာသနာကို စောင့်ထိမ်းတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာ...
Copyright © 2011 အမျိုးသားအားမာန် | Powered by Blogger